Wholesale PET Mukombe Lids Mugadziri uye Mutengesi | Copak
PET Mukombe Lids
Shanghai COPAK indasitiri co., LTD inyanzvi kambani yezvikafu giredhi PET zvinhu zvigadzirwa. Inyanzvi muPET inonwa mukombe, PET ice cream mukombe, PET yekumukaka mukombe, PET dhishi chikafu chikafu, PET chikamu chikamu, mabhodhoro ePET uye zvichingodaro. ChokwadiPET CUP VADUKU Zvese zvigadzirwa zvedu zvinoenderana nemhando yepamusoro mhando uye zvinonakidzwa nemukurumbira wakanaka mumisika dzakasiyana siyana pasirese.
1.Color: Crystal-yakajeka, kana tsika yakadhindwa
2.Mashoko: Polyethylene Terephthalate (PET)
3.Chivharo: chivharo chakapetana kana chivharo chedome
4.Kushandisa: PET CUP
5. Pasuru: 1000PCS / CTN
6. MOQ: 30,000pcs (Iyo yakawanda kwazvo, mutengo wepasi)
7. Chiteshi: Ningbo kana Shanghai, China
8. Usage Temperature: Kunogara uye kutsemuka nemishonga, Freezer nemishonga
Shanghai COPAK indasitiri co., LTD inyanzvi kambani yezvikafu giredhi PET zvinhu zvigadzirwa. Inyanzvi muPET inonwa mukombe, PET ice cream mukombe, PET yekumukaka mukombe, PET dhishi chikafu chikafu, PET chikamu chikamu, mabhodhoro ePET uye zvichingodaro. Chokwadi PET CUP LIDS inopihwa.Zvese zvigadzirwa zvedu zvinoenderana nemhando yepamusoro mhando uye inonakidzwa nemukurumbira wakanaka mumisika dzakasiyana siyana pasirese.
Isu tiri vamwe vevatengesi vakanakisa vePET CUP muChina. Iine morden workshop, yepamusoro michina michina, yakashongedzwa uye yakasununguka nharaunda, uye yakaoma esisitimu kudzora system, yedu PET makapu uye mabhodhoro akaendeswa kunze kwenyika.
Kambani yedu inochengeta kutenda kwe "Kutendeseka kubatana, Hwakanakisa mhando, mabasa akanaka". Tiri kugara tichiedza kupa zvirinani chigadzirwa uye sevhisi.
Kutarisira kumberi kuhukama hwebhizinesi newe. Chichava win-win win mushandira pamwe.
Nezve PET CUPzvivharo, isu takagadzira akawanda mapatani eati sandara uye dome muvharo. Iyo dhayamita inosiyana kubva pahukuru 4.5mm, 6.2mm7.4mm, 7.8mm, kusvika 90mm uye 98mm zvichingodaro. Iyo dhayamita yePET mukombe lidszvinoenderana nemuromo kukura kwePET kapu pachayo. Hazvina mhosva kuti nderupi rudzi rwauchasarudza, ese iwo anowirirana neyedu roll roll yem kapu yePET zvakanaka. Saka hapana kudonhedza ndiko kweKusimbisa mhando vimbiso.
Welcome kushanyira boka redu. Paunongobatana nesu, iwe unonzwisisa kuti chii chinokunda-kukunda bhenefiti.
Heti tag: PET mukombe zvivharo, PET KOMPU, kuhwina kuhwina KUBATSIRA, HAKUNA RUKU, ICE CREAM PET CUP
Pashure: PET ice cream mukombe
Zvadaro: PET Kiravira Mukombe
Ultra Yakajeka CUP
PET Mukombe 16oz
Crystal Yakajeka epurasitiki mukombe
PET Mukombe MuChina